IsiNgisi sababaleki, ama-Asylees, ama-SIV, kanye nezisulu Zokushushumbisa - Isikhungo Sezemfundo Yezilwimi ezimbili
IsiNgisi Sababaleki, Ama-Asyl, SIV, kanye Nezisulu Zokushushumbisa
Mayelana noMnyango we-RSS we-BEI
Amakilasi Akho Ezindleko
Ukuxhaswa Kwezezilimi (ISpanishi, isi-Arabhu, isiFulentshi, uFarsi, isiPedi, isiSwahili, isiTurkey)
Izinsizakalo Zokusekelwa Ziyatholakala
Ukudluliselwa Kwesekela Abalingani Bethu
Ukubandakanya Umnyango Wezabaleki
I-Bilingual Education Institute (BEI) isineminyaka engu-40 isebenzela ababaleki nabafundi bokufika. Phakathi neminyaka engamashumi amathathu edlule, i-BEI inikeze amakilasi e-ESL ezinkulungwaneni zabokufika abasha, ababaleki, izisulu zokushushumbiswa, kanye nezivakashi ezisuka phesheya ezimele wonke amazinga ezenhlalo, ezemfundo, ezizwe, nezomnotho. I-BEI inikeza ukufundisa okuseqophelweni eliphezulu kubafundi bethu, ibakhuthaza ukuba bazuze ezifundweni, kwezamabhizinisi, nasemiphakathini yomhlaba wonke neyasendaweni. Imphumelelo kule mikhakha inika abafundi amandla abafundi bethu ekufundeni ulimi futhi ibenze bakwazi ukukhombisa ukuthuthuka emakhonweni abo olimi. I-BEI inokuhlangenwe nakho kokufundisa isiNgisi ngamakhono ahlukahlukene: I-Basic Literacy, i-ESL, Uhlelo LwesiNgisi Olujulile, Ukulungela Umsebenzi, kanye ne-ESL Yasemsebenzini okuhlanganisa kodwa kungagcini ngokuphepha kanye nezifundo zokukhuluma nesilulumagama ezihlobene nomsebenzi. Amakilasi ethu ahlobene nomsebenzi asebenze nezinhlobo eziningi zezimboni: isevisi yokudla, izindawo zokudlela, namahhotela, ukukhiqiza, nokufakwa kokushisisa nokupholisa. I-BEI iyingxenye ye-Houston Refugee Consortium yabahlinzeki benkonzo yababaleki abebesebenza ngokubambisana iminyaka eyi-15 edlule. Umfelandawonye wama-ejensi uzakwethu wabelana ngezimali zezwe ezifana ne-RSS, TAG, ne-TAD emzamweni wokuhlinzeka ngezinsizakalo ezisebenza kahle kakhulu neziphelele kubabaleki ababuyiselwe e-Houston. Eminyakeni eyi-10 edlule, i-BEI ibilokhu ingusonkontileka oyinhloko wazo zonke izinhlelo ze-RSS Education Services futhi inokuhlangenwe nakho okubanzi ekuqeqesheni, ukubonisana, nokuqapha ukuthotshelwa kwezinhlelo nezimali ukuze kuqinisekiswe imiphumela eyimpumelelo yezinhlelo zozakwethu.
Ngo-1988, i-BEI yayingesinye sezikole ezimbalwa ezizimele e-Texas ezigunyazwe yi-US Immigration and Naturalization Service ukufundisa isiNgisi kanye neCivics kubafiki abasanda kubhaliswa ngokusemthethweni ababethole ushwele endaweni yase-Houston. Ngo-1991, i-BEI yaba usonkontileka abangaphansi kwe-consortium ne-Houston Community College System ehlinzeka nge-ESL (amazinga 1, 2 & 3) exhaswe yi-National Literacy Act (NLA) ka-1991, PL 102-73. Ngo-1992, i-BEI yaklonyeliswa ngoxhaso lokusiza umphakathi nguMkhankaso WoMbusi Wokulwa Nobandlululo Lokuqashwa, lapho i-BEI yathola ukuqashelwa okuvelele kuMbusi ngezinkonzo ezihlinzekiwe. Kusukela ngo-1995 kuya ku-1997, i-BEI yanikeza abafundi, iningi labo okwakungababaleki, Ukuqeqeshwa Kokuphathwa Kwehhovisi Lezilimi Ezimbili. Uhlelo luxhaswe yi-JTPA Title II-A, II-C/ Houston Works. Ngo-1996, i-BEI yathola uxhaso lwe-Texas Citizenship Initiative (Citizenship Outreach) evela kwa-TDHS, Ihhovisi Lokuthuthela kwelinye izwe kanye Nezindaba Zababaleki. I-BEI ibilokhu ihlinzeka ngezidingo zemfundo zababaleki e-Harris County kusukela ngo-1991, nge-RSS, TAG, kanye nezibonelelo ze-TAD ezivela ku-TDHS, namuhla yaziwa ngokuthi i-HHSC.